उपचारका लागि बुटवलबाट काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा भारत्तोलनका बिश्व बिजेता रुप कार्कीको निधन - DonNepal
९ माघ २०७७, शुक्रबार १५:४८ DON	0 Comments	Rup Karki ko nidhan
DON नेपाल । भारत्तोलनका स्वर्णपदक बिजेता रुप कार्कीको निधन भएको छ । नेपालको रुपन्देही स्थायी घर भएका कार्कीको बुटवलबाट काठमाण्डौ उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दा बीच बाटोमै निधन भएको हो । बुटवलमा उपचार असम्भव भएपछि काठमाण्डौ ल्याउँदै गर्दा बीच बाटोमा निधन भएको श्रोतले बताएको छ ।
चार दिनसम्म सञ्चालित मास्टर–२ प्रतियोगितामा कार्कीले दुई सय बढी देशका करिब ७ सय जना प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पारेर स्वर्ण जितेका हुन्। नेपालको खेल इतिहासमा यो खेलमा स्वर्ण पदक जित्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। उनी अमेरिकास्तरीय प्रतियोगितामा झण्डै दर्जन खेलमा स्वर्णपदक जित्दै च्याम्पियन बनेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय भारत्तोलन (पावर लिफ्टिङ) खेलमा दोस्रो पटक विश्व च्याम्पियन बन्न सफल भएका थिए।
← बाध्यताले दोश्रो बिवाह गरेकी नायिका स्वेता खड्का बिहेपछि किन आइन वि`वादमा ?
टिकटकमा युवतीहरूको अनेक ‘हर्कत’, हेर्न पनि लाजैभो (भिडियोसहित) →
नेपालमा किन आयो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उच्च टोली ? ( भिडियो )
१२ पुष २०७७, आईतवार २३:०२ DON	0
१५ पुष २०७७, बुधबार २३:५६ DON	0
ओलीको समृद्धि यात्रामा नेपाली सुखी कि दुःखी ?
१३ पुष २०७७, सोमबार २२:५० DON	0